Abbaabiyyuummaa Kee dhuunfattee, Saba Kee ulfinnaaf bilissummaa goonfachiisuuf kaayyoo tokko Isa galmaan gahuuf – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAbbaabiyyuummaa Kee dhuunfattee, Saba Kee ulfinnaaf bilissummaa goonfachiisuuf kaayyoo tokko Isa galmaan gahuuf
Abbaabiyyuummaa Kee dhuunfattee, Saba Kee ulfinnaaf bilissummaa goonfachiisuuf kaayyoo tokko Isa galmaan gahuuf dhamaatu qabaatta taanaan, akka sabaattii waan hedduu duubatti nu harkisuu ni qabna moo hin qabnuu..?
Fakkeenyaaf oromoo ta’ee, KAAYYOO BILISSUUMMAA San galmaan gahuuf dirqama fudhatee,
1ffaa,, kaayyoof jecha Kan maraattuu ta’ee, fincaan dhugaa, dasee cicciitaa kaayyatee jiraachuun qabsoo geggeesuu ni jiraa…..?
2ffaa,, kaayyoof jecha namnii of kennee kadhaa irrattii bobba’ee jiraatuu ni jiraa…?
3ffaa,, kaayyoof jecha namnii amantii ofii geeddaree, kallattii qabsoon barbaachiistuu San geggeesuuf jiruufii yaaduus ni jiraa..?
4ffaa,, kaayyoof jecha namnii sabboonummaa ofii dhokfatee, Saba isaa milkeessuuf moottummoolee dhufan Jala galee , kaayyoo Sana galmaan gahuuf lafa jalaan hojjachuuf yaaduus ta’ee hojjachaa jiru ni jiraa…?
Mee kan ilmaan HABASHAA immoo haa ilaalluu……
Kuun kadhataa fakkaatee, kadhattuummaan oromiyaa keessatti bobba’ee, dachiif lafa iddoo qubachuu qabu qubatee achumaan abbaa lafaa ta’ee hafaa.
Kuun barsiisaa, kuun hojjataa, kuun amantaa geggeessaa fakkaachuun, rakkoo hedduu hardhaa, obsaan dabarsanii oromiyaa boruu dhaaluuf warra kalleessaa hanga boruutti kaayyoofatanii socho’aniidha.
Warroota kaayyoo isaanii Sana geggeessaa jiraniif akka sabaattii cinaa dhaabbatanii ilmaan HABASHAA xiqqaa hanga guddaatti Kan gargaaraniidha.
Kadhatoota Saba isaanii warrii sirriitti adda baafatanii beeku, kanaaf iddoo tokkootti kadhataa Saba biraa sirriitti miidhamee jiru tokkoofii kan Habashaa miidhama tokko malee marxoo uffattee kadhatu tokko Wal bira keettee ilmaan HABASHAA hunda karaa San irraan akka darban gootee, Kan waan qabaniin qarqaaraniinii waan qaban kennuun bira darban Kan Saba isaanii ta’e Sana qofaafi.
Kana jechuun hangam akka Wal utubaa kaayyoo irrattii bobba’an Sana galmaan geessuuf dhama’aa jiran Kan nuuf mirkaneessuudha.
AMHAARRII Kaayyoo boru LAFA OROMIYAA dhaaluuf kalleessa hanga hardhaa geggeessaa jiran Kan barruun golaabamuu miti.
meeqatuu, Ani oromoodha jedhee , hojiiwwaan Moottuummaa NAANNOO OROMIYAA keessattii , eenyummaa ofii dhoksee kaayyoo bobba’aniif Sana galmaan gahuuf jecha jiraataa jiraa?
Meeqatuu, otuu fayyaa guutuu qabuu, qaamaan miidhamee jira, jechuun kadhaa irrattii bobba’ee , kaayyoof jecha jiruuf jireenya ofii xinneessee, qee’ee keenyattii bobbaafamee , jiraachaa jiraa?
Meeqatuu, lafaaf qabeenya ofii hundaa naannoo ofiittii dhiisee, gara oromiyaattii godaanuun WAARDIIYAA namaa, ta’ee, yookiin kophee namaa haxaayaa, yookin immoo daldalaa ta’ee, kaayyoo guutuu ilmaan HABASHAA ta’e, Kan AMANTAA TOKKICHA , Kan AFAAN TOKKICHAA, Kan ALAABAA TOKKICHAA, Kan AADAA TOKKICHAA fii ABBAAN LAFA GUUTUU ETHIOPIA tuu nuhi qofaadha jedhaniin San galmaan gahuuf yeroof cabee hojii ofii geggeessaa jiraa…?
Walumaa galattii sanyiin HABASHAA kuniin kaayyoo bobbaafamaniif Sana xiqqaaf guddaan isaanii qabsoo irrattii bobba’aniif qooda irraa eeggamu bahachuun milkaayina boruutif dachii keenya irra jiraataa jiran ta’uu isaanii Kan hunduu beekee, hojiiwwaan isaaniis ilaalee mirkaneefachuu danda’uudha.
Biyya Sana keeysattii mootolee isaaniittiin baroota milkii dabarsaa turaniis Moottuummaa dargii fii Moottuummaa wayyaaneetiin kaayyoof fedhiin isaanii gufatee bakka isaan yaadan San gahuufii Dhabuun isaa baayyee isaan mufachiisee, cabnanaaf isaan saaxilus , abdii kutatanii otuu hin teenye, tooftaalee garagaraatiin fayyadamanii, bakka kaleessa gahuuf imalaa turaniif San dhaqabuuf , jecha
Moottuummaa DARGII FII Moottuummaa WAYYAANEE irraallee dheesanii balaaleefachuu qofaan dhaloota isaanii otuu du’aaf hin saaxillee, Eenyuummaa ofii dhokfatanii hojii Moottuummaa San keessa hunduu haala danda’ameen keessa seenee, lafa Jalaan warra kaayyoo saniif jecha of kennanii hojjataa turtaniifii ammas hojjachaa jiraniidha
Ethiopia: ጃዋር በዶ/ር አብይ ንግግር ተናዶ የጻፈው ጽሑፍ እና የአበበ ገላው ምላሽ | Jawar Mohammed | PM Dr Abiy | Abebe Gelaw
Kabajamoo Obbo Lammaa_magrsaa
Dr. Nuredin Luke, mucaa xiqqaa qaxalee kana! Yoo sabaaf baratan akkasi. Har’a Oromiyaa keessa doktoroota meeqatu jira? Isaan keessaa Nuuraddiinota meeqa qabna? Yeroon qormaata hamtuu isin dura keessee jirti. Isin hunduu akka qormaata seenaa kana hin kufne abdiin qaba. Dr. Nuredin isin maraaf fakkeenya haa tahu. Mucaan kun kophaa isaa tahee gargaarsi ogummaa gumaachaa jiru yoo xiqqaate waan Biiroon Fayyaa Oromiyaa hojjechaan jira jedhu yoo caale malee hin hanqatu. Biyti osoo mootummaa sabaaf yaadu qabaattee ogeeyyii akkasii kana caalaatti akka sabaaf bu’aa buusaniif jecha hoggansa damee fayyaa itti kennatti ture.
Amaarri “Daashen Biiraa” keessatti summii naqee naannoo Oromiyaa fi Tigiraayitti tamsaasaa jira. Mootummaan Tigiraay uummata isaa waan tiksuuf bira ga’eera. Oromoon inni mootummaa hin qabne akkam ta’e laata?